एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल नगर्ने ! - Sagarmatha Online News Portal
एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल नगर्ने !
काठमाडौं । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए- एमसीसीको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्ने हो, सहमतिका साथ हुन्छ । प्रायः सहमतिको भन्दा आफ्नो कुरा माथि पार्न खोज्ने ओलीको एमसीसीबारेको भनाइलाई नेताहरुले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् ।
सचिवालयको अर्को बैठक आज (मंगलबार) बस्दैछ । यो बैठकको मुख्य एजेण्डा सम्भवतः एमसीसी नै हो । सचिवालय बैठकको मिति तय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । दुई अध्यक्षबीचको भित्री कुराकानी के भयो भन्ने अरु नेताले थाहा पाएका छैनन् । तर, विषय एमसीसी नै थियो भन्ने बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
यसबीचमा पार्टीभित्रबाट आफूलाई हटाउनेसम्मका सबै अस्त्र असफल पारेका ओलीले एमसीसीको नाममा फेरि अप्ठेरो पार्न खोजिएपछि एमसीसी अस्त्र प्रचण्डतिरै फाल्ने रणनीति बनाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ- प्रचण्ड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका बहुमत नेताहरु एमसीसी संसदबाट पारित नगरौं भन्नेमा उभिए भने ओलीले त्यसमा असहमति जनाउँदैनन् ।
देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न दबाव दिइरहेका छन्, तर प्रचण्डको प्रष्ट धारणा आएको छैन । त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीको सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । केपी ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेता थिए । एमसीसीका सन्दर्भमा आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौताको मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएबाहेक कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्नता नभएकाले उनी यसमा अडान लिने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुको भनाइ छ ।